नेपालमा उत्पादन हुने मकैमध्ये ७० प्रतिशत किसानले आफै प्रयोगमा ल्याउँछन् | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » नेपालमा उत्पादन हुने मकैमध्ये ७० प्रतिशत किसानले आफै प्रयोगमा ल्याउँछन्
नेपालमा उत्पादन हुने मकैमध्ये ७० प्रतिशत किसानले आफै प्रयोगमा ल्याउँछन्
वरिष्ठ कृषि अधिकृत, मकै सुपरजोन–दाङ
नेपालमा करिब नौ लाख हेक्टरमा मकै खेती भइरहेको छ । करिब २४–२५ लाख मेट्रिकटन मकै उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत दानामा र बाँकी सबै घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ । दानाबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने मकै अरुमा काम लाग्दैन । त्यसैले मकैमा नेपाल आत्मनिर्भर भइरहेको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेको सुपरजोनमध्ये मकैको सुपरजोन दाङको देउखुरीमा रहेको छ । यहाँ सातहजार हेक्टरमा मकै खेती भइरहेको छ । वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश रेग्मी जो रामपुर कृषि क्याम्पसबाट मकैमा मास्टर्स गर्नुभएको छ, प्रस्तुत छ, मकैको बारेमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीः
मकै सुपरजोनमा हुनुहुन्छ, नेपालमा मकै अवस्था के छ ?
–नेपालमा हाल नौलाख हेक्टरमा मकैखेती भइरहेकोछ जसमा २४–२५ लाख मेट्रिकटन मकै उत्पादन हुन्छ । यसको ७० प्रतिशत क्षेत्र पहाडमा र ३० प्रतिशत क्षेत्र तराईमा हुन्छ । पहाडको मकैखेती परम्परागत खालको छ । त्यसमा पनि सबभन्दा बढी वर्षे (वर्षायाममा उत्पादन हुने) मकै उत्पादन भइरहेको छ । जो उद्योगहरुलाई काम लागिरहेको छैन । खेती प्रणालीमा केही सुधार भएपछि मकैखेती पनि व्यावसायिक रुपमा कतै कतै हिउँदै (हिउँदमा उत्पादन हुने) वसन्ते मकै उत्पादन शुरु भएको छ । त्यसले उत्पादनमा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
तर मकैमा अझै आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन किन ?
–उत्पादन वृद्धिसँगै माग पनि बढी रहेको छ । पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित विज्ञहरु भन्छन्, केही वर्षमा पोल्ट्री व्यावसायीको वृद्धि सिधै दोब्बर हुन्छ । त्यही अनुपातमा मकैको माग दिनदिनै बढी रहेको छ । जुन गतिमा मकैको माग बढी रहेको छ त्यो गतिमा मकै उत्पादन बढी रहेको छैन । मकै खेतीका लागि जुन प्रविधिहरु किसानले प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रयोग गरिरहेको छैन । अबको केही वर्षमा मकै उत्पादन दोब्बर भन्दा बढी गर्न सकिएन भने आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । नेपालमा मकैका ५–७ वटा हाइब्रीड जातहरु छन् । ती जातको बीउ किसानलाई सस्तो दरमा सुलभ प्राप्त हुनुपर्यो । ५–६ सय प्रति केजी विदेशी मकैका बीउ किनेर किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो एकदमै महँगो हो । नेपाली बीउ यही उत्पादन गरेर एकसयदेखि डेढसय प्रति केजीसम्ममा किसानलाई उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ । र, उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यहाँ नेपाली हाइब्रीड मकैको बीउ पाइरहेको छैन । सबै विदेशी बीउमा भर परेका छन् ।
मकै उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले सुपरजोन नै स्थापना भएको छ, उता, नीजि क्षेत्रबाट पनि विभिन्न परियोजनामार्फत मकैमा लगानी भएको छ तैपनि माग अनुसारको उत्पादन किन भइरहेको छैन ?
–पहाडमा ७० प्रतिशत क्षेत्रमा उत्पादन हुने मकै उद्योगमा आउने हो भने त्यति समस्या देखिने छैन । त्यहाँ उत्पादन हुने थुप्रै मकै खेर जान्छ । त्यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । अर्को कुरा परम्परा ढंगबाट भइरहेको खेतीका कारणले पनि उद्योगको माग पुरा गर्न सकिरहेका छैनौ ।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको पकै सुपरजोनको प्रमुख भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले भनेको जस्तो यहाँ काम भइरहेको छ कि छैन ?
–दुई वर्ष भयो हामीले काम गर्न लागेको । यो दुई वर्षमा सोचे जस्तो व्यापक परिवर्तन ल्याउन त सकेका छैनौ । तर उत्पादन बढाउने र मकै खेतीलाई आधुनिकीकरणतिर लैजाने काम भइरहेको छ । खेती गर्नका लागि लेवर (मजदुर) चाहिदैन, एकैजनाले सबै काम गर्न सक्छ भने कुरा किसानले बुझ्न थालेका छन् । एक दुईजनाले मात्र प्रविधिको सहायताले १०–१५ विघा खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कन्फिन्डेट किसानमा बढ्दै गएको छ । अर्थात समग्रमा भन्ने हो भने यो सुपरजोन सञ्चालनमा आएपछि मकै खेतीप्रति आकर्षण बढेको हो । मलाइ लाग्छ अबको बाँकी अवधिमा मकै क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धी हुन्छ ।
यो सुपरजोन अन्तरर्गत तीन सिजन गरि सातहजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती भइरहेको छ । यसको उत्पादनले मागलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ?
–यहाँको सबै उत्पादन एकै ठाउँमा गयो भने एक दुईवटा उद्योग मात्र सञ्चालन हुनसक्छ । यो जिल्लामा एकघण्टामा ७–८ मेट्रिकटन मकै चाहिने उद्योग पनि छन् । त्यसैको हिसाब गर्ने हो भने वर्षभरिलाई एउटा वा दुईटा उद्योगलाई मात्र यहाँको उत्पादनले पुग्नेछ । राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ भने नमूना देखाउन सकिन्छ ।
सबभन्दा विवादित बाली भनेको मकै हो । कहिले घोघा लागेन, कहिले दाना लागेन, कहिले बोट नै उम्रेन भनि
विवादहरु आइरहन्छन् यस्तो किन हुन्छ ?
–हो वास्तवमा यो विवादीत बाली हो । र, सेन्सेटिभ पनि हो । एउटै बोटमा भाले र पोथी हुन्छ । कहिले काही क्रस गराएर प्रजनन गराउँदा कही कतै मिस्टेक हुन्छ, यस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । हाइब्रीड बीउहरु बाहिरबाट आएका हुन्छन् कतिपय अवस्था टेष्ट नभएका पनि हुन्छन् । अर्थात किसानको हातमा खराब बीउ गएको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि उत्पादनमा कहिले काही समस्या देखाइरहेको हुन्छ । यसको सुधारका लागि प्रविधिमा नै जानु पर्छ । किसानलाई सही प्रविधि दिन सक्यौं भने यो समस्या विस्तारै आफै समाधान हुँदै जान्छ ।
मकैको प्रजननमा समस्या छ भन्नुभएको छ, यस क्षेत्रमा नार्कले काम गरिरहेका छन् कि छैन ?
–नार्कले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । प्रजननमा समस्या देखिनु भनेको मकै कहिले लगाउने समस्याले पनि फरक पर्छ । अहिलेको मौसमले पनि निकै समस्या गरेको छ । कहिले सोचेको समयमा चिसो हुँदैन, कहिले गर्मी हुनुपर्ने बेला चिसो भइरहेको हुन्छ । पानी पर्ने मौसममा पानी परिरहेको हुँदैन, विना मौसम पनि पानी परिरहेको हुन्छ । अर्थात मौसम परिवर्तनले पनि यसको प्रजननमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसले वैज्ञानिकलाई पनि चुनौति दिइरहेको छ । तर मोटामोटी एउटा खालको सिफारिश भइरहेका हुन्छ । तराईमा असोजको अन्तिम हप्तासम्ममा मकै लगायो भने त्यति समस्या हुँदैन । हिमाल र पहाडमा पनि आफ्नै खालको मौसम छ र त्यस अनुसार खेती लगाउने सिफारिश भएको छ ।
मकैका लागि नार्कले अहिले नयाँ के गरिरहेका छन् ?
–मकै हाइब्रीडका लागि आमा–बुवा निकालि सकेका छन् । अझै राम्रो भएन भनि कुराहरु भइरहेकोछ । वैज्ञानिकहरुले हाइब्रीड बीउका लागि आमा–बुवा चयन गर्ने काम सकाएको छ । सरकारलाई बुझाई पनि सकेको छ तर त्यसलाई बीउ बनाउने काम भइरहेको छैन । बीउ बनाउने काम नीजि क्षेत्रले गर्ने गरेको छ । मैले थाह पाए अनुसार हालसम्म निजि क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका छैन । बीउ बनाउने काम ढिलो भइरहेको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने मकैबाट के के बन्छ ?
–यहाँ उत्पादन हुने मकै दानाका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको छ । उत्पादन भएकोमध्ये ३० प्रतिशत मकै मात्र दाना उद्योगमा जान्छ । ७० प्रतिशत मकै किसानले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेका छन् । ७० प्रतिशतमध्ये २०–३० प्रतिशत खेर जान्छ ।
कर्नफलेक्स जस्ता खानेकुरा बनाउनका लागि चाहिने मकै हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन ?
–हुँदैन । त्यो बाहिरबाट नै ल्याइरहेका छन् । यसका लागि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसखालका मकैहरु कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । मलाई पनि यसमा त्यति जानकारी छैन । मैले सुनेको, भैरहवामा चिजबल (खानेकुरा) उद्योग छ । उसले बाहिरबाट ल्याउँछ किनभने नेपालको उत्पादन हुने मकै त्यसमा काम लाग्दैन ।